Global Voices teny Malagasy » Rendrika anaty loto, ‘Reniranom-pako’ manemitra ny araben’ny renivohitr’i Libanona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2015 19:37 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana, Vaovao Mafana, Voina
“Reniranom-pako” miparitaka ao an-drenivohitra Libaney, Beirota taorian'ny orana ririnina voalohany. Sary: You Stink Page  (Maimbo Ianao) tao amin'ny Facebook
Avy ny orana tao Libanona ary nivangongo manerana ny arabe nandritra ny volana maromaro ny fako ao Beirota, nivadika ho “reniranom-pako” ny araben'ny renivohitra. Tampin'ny ny fiavosan'ny fako, nahatonga ny mpikatroka hanao fihetsiketsehana nandritra ny volana maromaro, ny tatatra fanarian-drano ao an-tanàna, ary tsy lazaina ho tsy azo visavisaina ny tahotra isian'ny valan'aretina kôlera.
Ao amin'ny pejin'ny hetsika Maimbo ianao ao amin'ny Facebook, mampitandrina ny amin'ny mety hielezan'ny valan'aretina kôlera ny mpikatroka:
Inona no holazaintsika amin'ny zanatsika rahampitso? Fa taranaka nanatri-maso ny fiavosan'ny fako isika? Fa taranaka nahita valan'aretina Kôlera isika? Ary raha manontany antsika ny antony nitrangan'izany izy ireo, inona no havalintsika? Lazaintsika azy ireo ve hoe miala tsiny isika satria sahirana tamin'ny olan'ny mpanao politika ny tsirairay rehefa noresen'izy ireo lahatra izahay fa olanay izany ary tsy navelany hiray hina izahay? Inona no havalintsika azy ireo? Fa maro ny tanora lahy sy vavy nidina an-dalambe ary nanao izay rehetra azo natao izahay mba hanafoanana izany?
Nanomboka nanao onjam-pihetsiketsehana ny hetsika laika Maimbo ianao na Tol3et Re7atkom tamin'ny volana Aogositra izay nahasarika Libaney an'arivony avy amin'ny saranga samihafa mba hanohitra ny krizin'ny fako, izay avy eo nitatra tamin'ireo fitakiana marobe satria nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana teny am-pandehanana ireo vondrona hafa. Natomboka tamin'ny fitakiana vahaolana maharitra amin'ny olan'ny fako izany, ary nahatonga ny olona nidina an-dalambe, saingy nivoatra tsy nijanona tamin'ny olan'ny fako ny toe-draharaha fa niresaka ireo olana lehibe kokoa mikasika ny kolikoly ao anatin'ny governemanta amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny fiahiahiana voalohany niteraka fihetsiketsehana manohitra ny tsy fahaizan'ny manampahefana mitantana ny olan'ny fako taorian'ny fanakatonana ny toeram-panariam-pako lehibe indrindra ao amin'ny firenena tamin'ny volana Jolay, niantso ny fametraham-pialan'ny governemanta, sy ny fampitsaharana ny kolikoly ny mpanao fihetsiketsehana ary mitaky fifidianana parlemantera vaovao, ankoatra ireo fitakiana hafa. Tsy nanana Filoha i Libanona nandritra ny herintaona, efa miaritra faharatsian'ny fotodrafitrasa sy ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro. Tamin'ny taona 2009, nitarin'ny antenimiera hatramin'ny taona 2017 ny fe-potoam-piasany, tsy misy ny fifidianana, lazaina fa noho ny korontana no antony.
Tao amin'ny bilaogy Baladi, mampitandrina i Najib:
Ka inona marina no mitranga rehefa manomboka avy ny orana? Hahatonga ny fako ho levona anaty tany ka hipàka any amin'ireo tahirin-drano ambanin'ny tany tahaka ny vovo sy ny lava-drano (tsy azo havaozina) voajanahary ny orambe mikija, izay midika fa io fako voatampo-drano io dia “hitsininika any anaty tany, hiparitadritaka etsy sy ery toy ny volomborona, handoto ny tany sy ny rano araka ny ikisahany”.
Anisan'ny olana ihany koa ny:
- Mandoto ny rivotra izay fohintsika misy akora misy poizina isan-karazany ny toerana fanariam-pako.
– Mety hitarika fihanaky ny aretina maro samihafa tahaka ny kôlerà, tefoedra, fivalanan-drà sy ny tazo dengy ny rano voaloto. Manampy izany ny tazon'ny tefoedra, ny sakafo voapoizina, ny aretin'ny tsinay sy ny vavony, ary ny tazo amin'ny aretin-tsinay.
– Manatri-maso ny fiakaran'ny tahan'ny homamiadana ireo andian'olona miaritra fangaro shimika tsy voakarakara.
Nizara ity lahatsoratra an-tsary ity ihany koa izy, mampiseho sarin'ny arabe rakotra reniranom-pako.
Mampitandrina ny bilaogy ara-pahasalamana eTobb:
Hahatonga ny fako hilevona any ambanin'ny tany hahatratra ny tahirin-drano ambanin'ny tany tahaka ny vovo sy ny lava-drano (tsy azo havaozina) ny orambe mivatravatra [..]. Ireny tahirin-drano ireny no ahazoana ny rano betsaka indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mponina ao Libanona amin'ireo karazan-mpandotoana miraraka ao amin'izy ireny, manana adidy isika hanazava ity loto ao amin'ny rano fisotro, fanadiovana sy fitarihan-drano tsy hay azavaina ity.
Tao amin'ny media sosialy, nizara lahatsary sy sarin'ny olana avy hatrany ny bilaogera, nandany volana maromaro izy ireo nampitandrina ny olona mikasika izany.
Bilaogera Libaney Joey Ayoub nizara ity lahatsary mampiseho ny “reniranom-pako” eny amin'ny arabe ity:
This is #Lebanon  now. As we warned months ago, this was bound to happen. Video from the #طلعت_ريحتكم  page. pic.twitter.com/yEWtypZudY 
Izao i Libanona amin'izao fotoana izao. Araka ny efa nampitandremanay volana maro lasa izay, tsy maintsy hitranga izao. Lahatsary avy amin'ny pejin'ny #طلعت_ريحتكم .
Bilaogera Abir Ghattas nanampy hoe:
Garbage in #Lebanon  is a concrete exmple that cant b ignored by any1, it represents: the corruption, no election, no work, no accountability
Ohatra mivaingana tsy azon'ny tsirairay atao tsirambina ny fako ao Libanona, mampiseho: ny kolikoly, ny tsy fisian'ny fifidianana, ny tsy fisian'ny asa, ary ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra izao.
Libaney mpanesoeso Karl Sharro nanatevin-daharana ny antoko mpihira :
The traditional ‘running of the garbage bags’ festival in Lebanon. A highlight for tourists, locals alike pic.twitter.com/1pFvkkgVT6  v @LeNajib 
Ilay fetibe nentim-paharazana ‘fampikorisana fitoeram-pako’ ao Libanona. Zavatra asongadina ho an'ny mpizaha tany, sy ny mponina ao an-toerana ihany koa
Niverimberina in-130 io sioka io hatramin'izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/27/75929/
 mampitandrina : https://www.facebook.com/tol3etre7etkom/posts/1652273985034716
 mampitandrina : http://blogbaladi.com/garbage-crisis-in-lebanon-why-is-everyone-warning-us-about-the-first-rains/
 ity lahatsoratra an-tsary ity : http://blogbaladi.com/flooded-streets-with-water-and-garbage/
 Mampitandrina : http://blog.etobb.com/en/lebanons-garbage-crisis-your-health-in-focus/
 October 25, 2015: https://twitter.com/joeyayoub/status/658228571014582273
 October 25, 2015: https://twitter.com/AbirGhattas/status/658286516997898240
 October 25, 2015: https://twitter.com/KarlreMarks/status/658251688508309505